AnyDesk 3.6.3 License Key 2018 Full Crack for PC & IMac [Latest]
ikhaya » uthanda & Activators » AnyDesk License Key 2018
AnyDesk License software Key yi fastest isicelo wehlabathi inokuthenjwa ekude desktop kubasebenzisi. Abasebenzisi Fikelela zonke iinkqubo zabo, imiqulu, kunye iifayile ezivela naphi na, ngaphandle kokuba ukuphathisa data zabo inkonzo ilifu. Konke ekufuneka uyenze ukuze uqalise kukuba ukulayisha AnyDesk License Key mac & pc futhi uvule ifayile inkqubo 1.1MB. Akukho ufakelo okanye (kwinethiwekhi) yesimo efunekayo. AnyDesk kuyinto Remote isicelo Desktop engummangaliso esebenzisa inomsebenzisi omtsha codec for users.Moreover, kuba ubhetyebhetye, ukhuseleko ezilula akuthethi ukuphazamisa ukusebenza abasebenzisi PC. I-software AnyDesk mvume Key isebenzisa TLS1.2 ufihlo, kwaye zombini iziphelo xhulumaniso zingqinisisiwe cryptographically.
AnyDesk Mac zecomputer elula kakhulu akuthathi indawo kakhulu kwaye zixinaniswe kwifayile 1MB, kwaye akukho ufakelo okanye yolawulo amalungelo ayafuneka. UI AnyDesk ilula kwaye kulula navigate.With AnyDesk License abasebenzisi Key Ungasebenzisa ikhompyutha zabo naphi na. ezenziwe zabo AnyDesk-ID ngundoqo Desktop lwabo, ngezicelo yakho yonke, imiqulu, neefoto. okubaluleke kakhulu, idatha yomsebenzisi kaThixo ihlala apho yeyethu kwi-hard drive yayo kwaye ayikho enye.
AnyDesk 3.6.3 Ivale plus IMvume run Key kwimo eziphathwayo ngokungagqibekanga, kodwa abasebenzisi uyifake ngathi inkqubo rhoqo ukuba bafuna to.During uxhulumaniso esebenzayo ekude, Izicwangciso eziliqela zifumaneka lula kwi menu bar.AnyDesk uyakwazi ukutshintsha uqhagamshelwano ukudala umgangatho games ividiyo kunokwenzeka, speed, okanye ukulinganisa phakathi kwabo bobabini. Ngaphezu koko, izilungiselelo kwakhona customizable kufana ebonisa isalathisi ekude, sound yokusasaza, kokucima eqhotyoshwayo ukuvumelanisa, ikhubaze ukulawula ngokuba umbono-kuphela, uvimba igalelo elinye lomsebenzisi, Ethatha screenshot.Files nako ukudluliselwa kunye AnyDesk ngokukhuphela ukuba eqhotyoshwayo uze ukheto ukuba ikhomputha ekude.
AnyDesk usebenza nge Linux, MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, kunye Windows XP ii operating systems.
AnyDesk License Key 2017 Iimpawu sibange
Easy ukusebenzisa ne ujongano lomsebenzisi friendly.
shortcuts Udibaniso zingagcinwa kwi Desktop ukufikelela ngokukhawuleza
Ngexesha session, zokulawula banoku phakathi macala.
Shortcuts kwekhibhodi inokuthunyelwa kwikhompyutha ekude, nkqu Ctrl-Alt-Del.
Umfanekiso yomsebenzisi-akhawunti in Windows iza kubonisa njengoko yesazisi xa isicelo ukudibanisa kwenye ikhompyutha.
Uluhlu uxhulumaniso elidlulileyo izipho ngpaha komzantsi AnyDesk ukwenza unxibelelwano endala ukuvulwa lula.
Ulwazi malunga ikhomputha ekude kunokubonwa tab yolwazi inkqubo.
imixholo yebhodi eqhotyoshwayo unako ukuvumelanisa ngaphesheya yomkhosi kunye ikhompyutha encedwayo.
Ezicocekileyo interface engazalanga kwaye lalibekwa ukhetho ekhoyo.
ubukhulu download Small (nje phezu 1 MB) kwaye Usekela Ukuthunyelwa.
Ngaba ukubaleka kwindawo esebenzayo kwaye Iquka umbhalo chat ubunakho.
Usekela uthumela ezimfutshane yezitshixo.
Indlela Crack AnyDesk Premium 3.6.3?
Umxokozelo AnyDesk wavuleka nge 2017 License Key
Faka AnyDesk kwaye ukulivula.
Khuphela ifayile mvume ukuya ukufakwa.
Nandipha kodwa zange uvuselele ukuba wakha wabuza.
Umxokozelo AnyDesk License Key 2018
← Visual CertExam Suite 4.3.2 uthanda Adobe Photoshop CC Crack →